पेरूले माचू पिचूको पहुँचलाई यसलाई जन पर्यटनबाट सुरक्षित गर्न सीमित गर्नेछ यात्रा समाचार
हामीले भर्खर भेनिसको स्थानीय सरकारले सेन्ट मार्क स्क्वायरलाई २०१ tourism सम्म सामूहिक पर्यटनबाट जोगाउन विभिन्न उपायहरू उठाएका बारेमा कुरा गरेका थियौं र यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूको उदाहरण विश्वको अन्य भागहरूमा माचू जस्तै पेरुमा रहेको छ। ।
र यो यो हो कि सब भन्दा प्रख्यात Inca गढी पतनको किनारमा छ किनकि ठूला लामहरू भित्र र बाहिर जानको लागि, टिकट किन्न वा केवल शौचालयमा जानको लागि। माचू पिचू दैनिक भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको ठूलो भीडले अधिकारीहरूलाई यस ठाउँमा पहुँच गर्न प्रतिबन्धहरू बढाएको छ।
युनेस्कोले माचू पिचूलाई विरासतको विश्व सूचीमा खतरामा पार्ने चेतावनी दिए पछि कदम चालेका थिएनन् यदि कदम चालेन भने। तिनीहरू केको बारेमा छन्?
1 किन यी कदमहरू चाले?
2 माचू पिचू भनेको के हो?
4 वास्तुकला र इतिहास
5 माचू पिचूमा कसरी पुग्ने?
किन यी कदमहरू चाले?
१ 1983 XNUMX मा माचू पिचूलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा घोषित गर्‍यो। ती सुरुका वर्षहरूमा, इन्का गढीले एक बर्षमा एक लाख भन्दा बढी आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरे। तर २०० everything मा सबै परिवर्तन भयो जब यो स्वीस कम्पनी न्यू ओपन वर्ल्ड कर्पोरेशनले आधुनिक विश्वका नयाँ W आश्चर्यका रूपमा मान्यता पायो। आठ सय हजार टिकटहरू त्यो बिकाल बिक्री गरिएको थियो र सबै कुराको गति गत वर्षसम्म द्रुत भयो जब यसले १,1.419.507१,, XNUMX०XNUMX आगन्तुकहरू प्राप्त गर्‍यो। पचाउन गाह्रो हुने भ्रमणहरूमा एक उल्लेखनीय वृद्धि।
शहरको संरक्षण व्यवस्थापन सुधार गर्न युनेस्कोले पेरूको सरकारलाई दुई बर्षको अवधि प्रदान गर्‍यो अन्यथा यसले जोखिममा रहेको विरासत साइटहरूको विश्व सूचीमा माचू पिचूलाई समावेश गर्ने छ। त्यो बिन्दु समाप्त हुनु अघि र सबैको खुशीको लागि, स्मारकलाई त्यस सूचीमा समावेश नगर्न समितिको नजरमा पेश गरिएका उपायहरू पर्याप्त थिए।
यी नयाँ नियमहरू जुन जुलाई १ देखि लागू भयो र समावेश:
यो गाच बिना माचू पिचू प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ।
प्रत्येक गाईडले अधिकतम १ 16 जना लिन सक्दछ।
दुई भ्रमण घण्टा स्थापना गरियो। पहिलो समूह बिहान6देखि दिउँसो १२ बजे र दोस्रो समूह दिउँसो १२ देखि साँझ :12: from० सम्म।
टिकटले साइट भित्र चार घण्टा मात्र रहन अधिकार दिन्छ। त्यस समयमा तपाईं मात्र जानुहुन्छ र पुन: पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ सेवाहरूमा जान।
यो आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अगाडि नै माचू पिचूको प्रवेश प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
कुज्कोका नागरिकहरूका लागि नि: शुल्क प्रवेश आइतवार मात्र हुन्छ।
सेल्फी स्टिकहरू, छाता, संगीत वाद्ययंत्र, बच्चा घुम्ने, जनावरहरू र खाना र पेय पदार्थहरूको साथ माचू पिचू पहुँच गर्न अनुमति छैन।
माचू पिचू भनेको के हो?
यो Inca शहर हो जसको नामको अर्थ पुरानो पहाड हो र यसलाई स्थानबाट लिन्छ जहाँ यो अवस्थित छ। पानीको पानी, प्लेटफर्म र मन्दिरहरूले घेरेको आर्किटेक्चरल परिसर परिसर १। औं शताब्दीमा इन्का पाचाकुटेकले निर्माण गरेको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसको समयमा यो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, धार्मिक र राजनीतिक केन्द्र थियो। आज यसको भग्नावशेषलाई युनेस्कोले मानविकीको सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा लिन्छ।
उरुबाम्बा प्रान्तमा कुज्कोको ११२ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित यो गढी जलमार्ग, मन्दिर र प्लेटफर्मले घेरिएको छ।
वास्तुकला र इतिहास
माचू पिचू दुई क्षेत्रहरुमा विभाजित छ: कृषिजन्य प्लेटफार्म वा कृत्रिम टेरेसको नेटवर्क र शहरी एक जसले प्रशासनिक कार्यहरू पूरा गर्दछ र वर्ग र भवनहरू समावेश गर्दछ जस्तै सूर्य मन्दिर, तीन विन्डोजको मन्दिर, मुख्य मन्दिर र कन्डोर क्षेत्र।
यी निर्माणहरूमा क्लासिक ईन्का शैली छ: ट्रेपेजोइडल ढोका र विन्डोज वा ढु stone्गाका पर्खालहरू जुन आयताकार आकारको साथ अमलगाम प्रयोग बिना नै सामेल भयो।
यसको निर्माणहरूले क्लासिक ईन्का शैली अनुसरण गर्दछ: आयताकार आकारमा पोलिश ढु stone्गाको पर्खाल भएका भवनहरू, एमालगाम, ट्रेपेजोइडल ढोका र विन्डोजको प्रयोग बिना नै एक साथ जोडिए। यसको भव्य वास्तुकलामा गढीको भरमा केहि १ 140० संरचनाहरु छन्।
माचू पिचू अनुसन्धानकर्ता हिराम बिंगम तृतीयलाई धन्यवाद दिईयो जसले Incas Vilcabamba को अन्तिम राजधानी खोज्दै थिए। वर्ष पछि सेट १ 1981 XNUMX१ मा "पेरूको ऐतिहासिक अभयारण्य" घोषित हुनेछ।
माचू पिचूमा कसरी पुग्ने?
माचू पिचूमा पुग्नको लागि तपाईले दुईवटा मार्गहरू रोज्न सक्नुहुन्छ: इन्का ट्रेलको माध्यमबाट वा रेलमार्गबाट ​​अगुआस कालिएन्टेससम्म र त्यहाँबाट कार लिई वा हिंडेर तपाईं पहाडमा पुग्नु भएको ठाउँमा पुग्नुभयो जहाँ गडा अवस्थित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » पेरू » पेरूले माचू पिचूको पहुँचलाई यसलाई जन पर्यटनबाट सुरक्षित गर्न सीमित गर्नेछ
Bruges मा good राम्रो कफी पसलहरु